Kooxaha Qarka U Saaran In Ay U Soo Baxaan Wareega 16-ka Ee Champions League %
Kooxaha Qarka U Saaran In Ay U Soo Baxaan Wareega 16-ka Ee Champions League
By Ramzi Yare	 Last updated Nov 4, 2019
Waxa Talaada la ciyaari doonaa kulamadii 4-aad ee wareega Group-yada tartanka champions League xilli ciyaareedkan iyada oo ay kooxaha ka qayb galay u dagaalami doonaan u soo bixista wakhti hore oo tartanka ah.
Saddexdii kulan ee la ciyaaray wareega Group-yada ayay ka dheceen natiijooyin lama filaan ah oo oo ku dhacday kooxaha waaweyn ee ka qaadanaya tartanka champions League.
Sidoo kale waxa jirta kooxo si fiican ku bilowday tartanka kuwaas oo haatanba hal kulan oo kaliya u jira in ay iska xaadiriyaan wareega xiga ee tartanka champions League.
Waxa jirta 5 kooxood oo haatanba iska xaadiriyay wareega Xiga ee tartanka champions League xilli ay 4 ka mid ah kooxahaas kaliya u baahan yihiin hal dhibic oo ay ka helaan kulanka 4-aad ee wareega Group-yada.
Halkan Hoose Kaga Bogo 5-da Kooxood ee aadka ugu dhaw in ay iska xaadiriyaan wareega Xiga.
PSG, Bayern Munich, Man City:
3-dan kooxood ayaa dhamaan wada badiyay 3-dii kulan ee ay ciyaareen tartanka waxana ay u baahanyihiin kaliya in ay hal dhibic ka helaan kulanka ay ciyaari doonaan bartamaha todobaadkan.
Atletico Madrid, Napoli:
Labadan kooxood ayaa dhankooda si weyn fursad ugu haysta in ay iska xaadiriyaan wareega Xig ee tartanka champions League marka loo eego in ay Napoli 7 dhibcood ku hogaaminayso Group-keeda iyo kooxda Napoli oo kaalinta 2-aad kaga jirta Group-keeda waliba leh 7 dhibcood.
10-ka Xiddig Ee Goolasha Ugu Badan U Dhaliyay Koox Kaliya Premier League Oo La Soo Saaray
Lazio ayaa Guul muhiim ah kusoo gaartay Garoonka San Siro muddo 30-sano ka dib